DHEGEYSO-Musharax Faroole oo baaq u diray madaxda Puntland iyo Galmudug. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Musharax Faroole oo baaq u diray madaxda Puntland iyo Galmudug.
Nofeembar 7, 2016 3:32 b 0
Garoowe, Nov 07 2016-Madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Faroole oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, kana mid ah xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay colaada Galkacyo.
Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole, ayaa ugu baaqay madaxda maamulada Puntland iyo Galmudug in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka magaalada Galkacyo, lagana wada shaqeeyo sidii nabada loosoo celin lahaa.
Sawirro-Micheal Keating oo Telefan ku wada hadalsiiyey madaxda Puntland iyo Galmudug.
DHEGEYSO-Wasaaradda caafimaadka Puntland oo soobandhigtay waxqabadka caafimaadka aasaasiga ah.